Zimbabwe reduces penalties on ownership transfer law - The Globe and Mail
Zimbabwe's President Robert Mugabe addresses supporters at a Heroes Day rally in the capital Harare, August 8, 2011.
Philimon Bulawayo/Reuters/Philimon Bulawayo/Reuters
Zimbabwe has reduced penalties for foreign companies that violate a government mandate to sell a majority of their shares to locals, according to a government notice obtained on Thursday.
Penalties for offences including falsifying shareholdings and company valuations will range from three to twelve months in jail, down from the previous five years imprisonment, the notice said.
Zimbabwe has given foreign-owned mines up to Sept. 30 to transfer a majority shareholding to local blacks under a 2008 law driven by President Robert Mugabe's ZANU-PF party.
Impoverished Zimbabwe does not have the money to pay for majority stakes in the mining firms and is likely using the ownership laws as a way to extract concessions and cash from foreign companies looking to tap into the resource-rich country's mineral wealth, analysts have said.
The world's two leading platinum miners, AngloPlat and Implats, have operations in Zimbabwe, while Rio Tinto runs a diamond mine in the country.
Mugabe's uneasy partner in a power-sharing government set up two years ago after a disputed 2008 election, Prime Minister Morgan Tsvangirai, has criticized the law, saying it threatens the country's fragile economic recovery.